PSJTV | बर्दियाका राजन: बिदेशमा नाम, स्वदेशमा गुमनाम !
बर्दियाका राजन: बिदेशमा नाम, स्वदेशमा गुमनाम !
रामजन चौधरी, जसले 'टाईटानिक' सिनेमा नहेरी लियोनार्दो संग दोस्ती गरे
बुधबार, ३० साउन २०७५ पिएसजे टिभी
उनलाई लियोनार्दो डि क्याप्रियोका बारेमा त्यतिबेलासम्म खासै थाहा थिएन । हलिउडका यी उद्भट सदाबहार नायकका कुनै पनि फिल्म उनले हेर्न भ्याएका थिएनन् । तर अचानक सन् २०१० मा उनले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा लियोनार्दोसँग एक गाइडका हैसियतले ३ दिन बिताउने मौका पाए । उनी हुन् –रामजन चौधरी, ठाकुरद्वारा बर्दियाका एक अनुभवी पथप्रदर्शक, चरा विशेषज्ञ र नेचुरलिस्ट । कैयन हाइप्रोफाइल विदेशी पर्यटकहरु उनलाई राजन नामले चिन्ने गर्दछन् ।
‘म हलिउडका फिल्म खासै नहेर्ने मान्छे । तर लियोनार्दोसँग ३ दिन बिताएपछि साथीहरुको दवावमा एकदिन टाइटानिक हेरें,’ झरीले निथ्रुक्कै भिजाएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गल किनारमा राजनले यस लेखकलाई सुनाए, ‘तर फिल्म हेर्ने धैर्य मसँग नभएका कारण टाइटानिक हेरिसक्न मलाई कैयन घण्टा लाग्यो । ल्यापटपमा फिल्म पज गरेर म बीचबीचमा पानी प्यूँथें । यताउता घुम्थें । अनि फेरि टाइटानिकमा घोत्लिन्थें । बल्लबल्ल मैले त्यो फिल्म हेरिसकें ।’
एकचालिस वर्षिय राजनलाई सानैदेखि वन्यजन्तु र प्रकृतिसँग अगाध प्रेम थियो । अनि सन् १९९७ मा उनले निकुञ्जमा आयोजित पथप्रदर्शक तालिममा भाग लिने मौका पाए । त्यसपछि उनी यस क्षेत्रमा अहोरात्र काम गरिरहेका छन् । कहाँसम्म भने, उनका जेठा दाजुलाई त्यसैताका निकुञ्जको एउटा आदमखोर बाघले खाइदियो । अनि उनी भने लगातार बाघ लगायत अन्य जीवजन्तु संरक्षण अभियानमा लगातार लागिपरेका छन् ।
राजनले संसारको सबैभन्दा स्यानो जङ्गली बिरालो, रस्टी स्पटेड वाइल्ड क्याट बर्दियामा पत्ता लगाए । एक रात उनी पर्यटक घुमाएर फर्किँदै थिए । गाडीको हेडलाइटका कारण त्यो सानो बिरालो टक्क अडियो । राजनले फोटो पनि खिचिहाले । अनि उनले त्यो फोटो फेसबुकमा अप्लोड गरे । शुरुमा उनलाई यस स्यानो बिरालोका बारेमा खासै जानकारी थिएन । तर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका रबिन कडेरियाले उक्त बिरालोको पहिचान गरेर राजनलाई नेपालमा सर्वप्रथम विश्वकै स्यानो जङ्गली बिरालो फेला पारेकोमा फोन गरेर बधाइ दिए ।
उनी भन्छन्, ‘मेरा दाजुलाई बाघले खानुमा बाघको कुनै गल्ति छैन । शिकार गरिरहेका बेला, संभोग गरिहेका बेला र आफ्नो बच्चाको स्याहार गर्दा कोही उसको छेउमा पुग्दा बाघ रिसाउने गर्दछ । नत्र बाघ खतरनाक जनावर होइन । बाघको सबै “सेन्स एक्टिभ” हुने गर्दछ । बाघले मान्छेलाई प्रायः आक्रमण गर्दैन । डिफेन्स मात्रै गर्ने गर्छ । पूर्णिमाको रातमा ऊ निकै लजालू हुन्छ । एकदमै गुप्त रहन मन पराउने बाघलाई हत्तपत्ति देख्न पनि सकिँदैन । तर कारणवश एकपटक मान्छेको रगत चाखिसकेको बाघले भने मान्छेलाई ठाडै आक्रमण गर्ने गर्छ । यस्तो बाघलाई आदमखोर भन्ने गरिन्छ ।’
तर जङ्गलको त्यस इलाकामा आदमखोर बाघ छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राजनका दाजु अन्य चारजना गाउँलेहरुसँग डाँडाभाटा लिन जङ्गल घुसेका थिए । यो उनीहरुको आफ्नै लापर्वाही पनि थियो । त्यो बाघले राजनका दाजु भन्दा पहिले अन्य दुईजना स्थानीयलाई मारिसकेको पनि थियो । पछि आदेश अनुसार आर्मीले घेरा हालेर उक्त बाघलाई गोली ठोकेर मारेको थियो ।
विश्व वन्यजन्तु कोष अर्थात डब्लुडब्लुएफले ओस्कार विजेता लियोनार्दोलाई सन् २०१० मा बाघ संरक्षण अभियानको दूत बनाएको हो । त्यसै सिलसिलामा उनी मासिँदै गइरहेको पाटेबाघको अध्ययन गर्न बर्दिया आएका थिए । बर्दिया घुमेर फर्किएपछि उनले आफ्नै लियोनार्दो टाइगर फाउण्डेशन पनि खोले ।
राजन स्मरण गर्छन्, ‘हलिउडको त्यत्रो भयंकर हस्ति भएर पनि लियोनार्दोलाई मैले एकदमै साधारण, मिलनसार र “डाउन टु अर्थ” पाएँ । हुन त एक गाइडका लागि सबै पर्यटक समान हुन् । मैले उनलाई अरु पाहुनासरह नै व्यवहार गरें । उनले दुईवटा हेलिकप्टर लिएर बडो तामझामसाथ बर्दियामा पाइला राखेका थिए । उनी जता गए पनि सुरक्षा र क्यामेराले पछ्याउँने गर्दथ्यो । तर २४ घण्टापछि लियोनार्दोले आफ्नो वरिपरिको उच्च सुरक्षालाई नकारे ।’
लियोनार्दोले जब राजनका ठुल्दाईलाई बाघले खाएर मारेको कुरा थाहा पाए, उनी निकै भावुक हुन पुगे । उनले राजनलाई भने, ‘तिम्रो दाजुलाई बाघले खाए पनि तिमी बाघ लगायत अन्य जीवजन्तुको संरक्षणमा लागेका रहेछौ । अचम्म लाग्यो । तिमीसँग म प्रभावित भएँ ।’
राजनले प्रफुल्ल मुद्रामा सुनाए, ‘लियोनार्दो फर्किएको केही समयपछि उनका अमेरिकी फ्यानहरुलाई निकुञ्जमा गाइड गरिरहँदा उनीहरुले बडो उत्साहित भएर मलाई भने, हामीले प्रत्यक्ष देख्न समेत नपाएका हाम्रा महान नायकलाई तिमीले गाइड गर्ने मौका पायौ । तिमीलाई भेटेर हामी दंग परेका छौं ।’
अझै पनि उनको लियोनार्दोसँग इमेलवार्ता हुने गर्दछ । लियोले केहीअघि उनलाई इमेल लेखेका थिए, ‘म फेरि नेपाल आउँछु । तिमीलाई अवश्य भेट्ने छु ।’
‘लियोनार्दो फर्किएको केही समयपछि उनका अमेरिकी फ्यानहरुलाई निकुञ्जमा गाइड गरिरहँदा उनीहरुले बडो उत्साहित भएर मलाई भने, हामीले प्रत्यक्ष देख्न समेत नपाएका हाम्रा महान नायकलाई तिमीले गाइड गर्ने मौका पायौ । तिमीलाई भेटेर हामी दंग परेका छौं ।’
सुन्दै जाँदा प्रकृति संरक्षण र पथप्रदर्शनमा राजनको संलग्नता र योगदानको सूची निकै वजनदार र लामो लाग्दै गयो । कैयन नेपालीहरुले उनको नाम नसुने पनि उनलाई नेशनल जोग्राफिक च्यानल, एनिमल प्लानेट, डिस्कभरी च्यानल र ट्राभल च्यानलले ‘लेबल वान’ नेचुरलिस्ट र गाइड भनेर सम्मान गरिसकेका छन् ।
राजनले प्रत्यक्षरुपमा डब्लुडब्लुएफ र फ्रान्सेली दुतावाससाथै बेलायतद्वारा लगानी गरिएको लिभिङ् विथ टाइगर जस्ता संस्थाहरुसँग पटकपटक काम गरिसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘कैयन नामी विदेशी संघसंस्थाहरु मसँग सहकार्य गर्न आउँछन् । तर नेपालमा पर्यटन विषयक कुनै पनि कार्यक्रमहरु हुँदा मलाई निम्तो आउँदैन । आफ्नो देशको हालत यस्तो छ । मेरो दक्षताको पहिचान प्रायःजसो केवल विदेशीहरुमाझ छ भन्दा गलत हुँदैन ।’
राजन अहिले प्रकृतिसँग जे गरिरहेका छन्, उनकै भाषामा यो उनको सानैदेखिको प्याशन हो । उनी अध्ययनशिल छन् । राम्रो अंग्रेजी बोल्छन् । उनलाई चिन्ने स्थानीयहरु उनको कडा मेहनतको दाद दिन्छन् । फुर्सदमा उनी विभिन्न चरा, पुतली, बनस्पति लगायत वन्यजन्तुहरुका बारेमा पढेर बस्छन् । अंग्रेजी भाषाका नयाँनयाँ आयामहरु खोतलेर अभ्यास गर्ने गर्दछन् ।
त्यसपछि बेलायतबाट वल्र्ड स्मल वाइल्ड क्याट फाउण्डेशनको टोली बर्दिया आयो र राजनको अन्तर्वाता लियो । राजन भन्छन्, ‘बर्दियाको जङ्गलमा दुईपटक त्यो जातको बिरालोसँग मेरो जम्काभेट भएको छ ।’
राजन समाजसेवा पनि उत्तिकै गरिरहेका हुन्छन् । चरा संरक्षण केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा बर्दिया प्रकृति संरक्षण क्लब खोलिएको छ । यसमार्फत उनी अन्य अभियन्ता र विशेषज्ञहरुसँग मिलेर समुदायका हरेक वर्गका बासिन्दासँग चरा र जैविक विविधता संरक्षणको अभियानमा आबद्ध गराएर तालिम तथा छलफल कार्यक्रमहरुको आयोजना पनि गर्ने गर्दछन् ।
उनी नियमित रुपमा स्थानीय विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई अंग्रेजी भाषा अभिबृद्धि तालिम कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिरहन्छन् । उनी विदेशी स्वयंसेवकहरुलाई आमन्त्रण गरेर स्थानीय विद्यालयमा अनेक कृयाकलापहरु पनि गर्ने गराउने गर्दछन् ।
उनी संबन्धित विषयमा विद्यावरिधीको थेसिस लेख्न बर्दिया पुगेका विद्यार्थीहरुलाई पनि गाइड गर्ने गर्दछन् । उनी गाइड उत्पादक तालिम पनि दिने गर्दछन् । उन्नाइस वर्षको उमेरमा सन् १९९७ मा सर्वप्रथम गाइड तालिम लिँदा उनको सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा आएको थियो । अहिले उनलाई चिन्ने युवाहरु उनीसँग केही न केही सिकिरहेका नै हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई अझै धेरै गर्नु छ । बाटामा बसेर क्यारामबोर्ड र तास खेलिरहेका युवाहरुको लागि म केही श्रृजनात्मक काम गर्न चाहन्छु ।’
उनी संबन्धित विषयमा विद्यावरिधीको थेसिस लेख्न बर्दिया पुगेका विद्यार्थीहरुलाई पनि गाइड गर्ने गर्दछन् । उनी गाइड उत्पादक तालिम पनि दिने गर्दछन् । उन्नाइस वर्षको उमेरमा सन् १९९७ मा सर्वप्रथम गाइड तालिम लिँदा उनको सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा आएको थियो । अहिले उनलाई चिन्ने युवाहरु उनीसँग केही न केही सिकिरहेका नै हुन्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘मलाई अझै धेरै गर्नु छ । बाटामा बसेर क्यारामबोर्ड र तास खेलिरहेका युवाहरुको लागि म केही श्रृजनात्मक काम गर्न चाहन्छु ।’
राजनले पिटर बुयर्नेलाई पनि गाइड गर्ने मौका पाएका थिए । पिटर हिरोशिमामा बम खसाल्ने नब्बेजना अमेरिकी आर्मीहरु मध्येका एक कर्णेल थिए । पिटर राजा महेन्द्रकै पालामा समेत निकै समय नेपाल बसेका थिए । शुरुमा उनी बाघको शिकार खेल्ने गर्दथे । उनले नेपालमा निकै बाघहरु पनि मारे । तर पछि उनी परिवर्तन भए र प्रकृति संरक्षणमा लागे । उनले आफ्नो निबृत्त जीवन लगभग नेपालमा नै बिताए । धेरै जसो उनी शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा बसे । शुक्लाफाँटाको नामाकरण पनि पिटरले नै गरेका थिए ।
पिटरसँग राजनको भेट सन् २००९मा बर्दियामा भएको थियो । राजनले उनलाई निकै पटक गाइड गरेका छन् । पछि पिटरले मेक्सिकोबाट एउटा रोयल फेमिलीलाई पनि बर्दिया घुमाउन ल्याएका थिए । राजनले उक्त रोयल फेमिलीलाई समेत गाइड गरे । राजन स्मरण गर्छन्, ‘उक्त रोयल फेमिलीले मलाई बेस्ट गाइडको उपाधिसमेत प्रदान गरेको थियो ।’
केही वर्षअघि पिटरको देहान्त भइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा एटम बम खसाल्ने दर्दनाक इतिहास बोकेका पिटर बुयर्नेको पटकपटकको लामो नेपाल बसाइ भने एउटा छुट्टै खोजको विषय हो ।
सामान्य परिवारमा जन्मिएका राजनको जीवन अनेक एडभेन्चरले भरिएको छ । उनले विश्वका अनेक हाइप्रोफाइल नेचुरलिस्टहरुसँग काम र सहकार्य गर्ने मौका पाएका छन् । बिगत केही वर्षदेखि उनले ठाकुरद्वारामा आफ्नै द डेन अल्टिमेट एडभेन्चर सेन्टर चलाइरहेका छन् ।
पोहोर साल, बिबिसीको एज अफ द बिग क्याट्स भन्ने डकुमेन्ट्रीको सुटिंगमा पनि राजनले काम गर्ने मौका पाए । बैज्ञानिकहरुले बर्दियाको जङ्गलमा यो डकुमेन्ट्री सुटिंग गर्नकै लागि दुईवटा विशेष क्यामेराहरु बनाएर ल्याएका थिए । सुटिंग प्रायः राति हुने गर्दथ्यो । यो मार्च महिनाको समय थियो, जतिबेला प्रायः जनावरहरुको प्रजननकाल हुने गर्दछ ।
राजन सम्झिन्छन्, ‘हामी क्यामेरा तयार गरिरहेका थियौं । सुटिंग क्रूले एउटा बाघलाई पछ्याइरहेको थियो ।
जङ्गलभित्रको खुल्लाचौरीमा बाघ आफ्नै शूरमा हिँडिरहेको थियो । त्यसअघि पनि हामीले उक्त बाघलाई त्यहाँ देखेका थियौं । तर उसले हामीलाई देखेको थिएन । तर यसपटक अचानक बाघले हामीलाई देख्न पुग्यो । अनि उसले एकातिर बुर्कुसी मार्यो । र, बाक्लो जङ्गलमा अलप भयो । तर त्यसपछि त्यो बाघ त्यहाँ देखा परेन । कसैगर्दा पनि देखा परेन । मैले के भन्न खोजेको हुँ भने, बाघलाई यदि कुनै स्थानमा केही असजिलो वा अप्ठ्यारो भयो भने ऊ कहिल्यै त्यहाँ फर्किएर आउँदैन । यो बाघको स्वाभाव नै हो ।’
बाघका बारेमा बिद्द्यावारिधी गर्ने बिश्वबिद्द्यालयका किताबी कीराहरूको संख्या हजारौं हुनसक्छ। तर राजन एक यस्ता अनुभवी बाघ बिशेषज्ञ हुन्, जो संग अनुभवको भण्डार छ। उनलाई विश्वभरका किताबी कीराहरुले चिनेका छन्, तर आफ्नै मुलुकको सरकारले चिनेको छैन। तर राजनलाई कुनै गुनासो छैन।
उनको व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टिको शोधभर्ना सराकारले दिने कुनै पनि पुरस्कार र सम्मानले शायद नगर्ला।
मृत्युदण्डको फैसलाविरुद्ध मुशर्रफद्वारा लाहोर उच्च अदालतमा पुनरावेदन
चीन पठाइने जहाजको चालक दलका सदस्यलाई आज तालिम दिइँदै
काठमाडौं : चीनको वुहानमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन तीव्र तयारी भइरहेको छ । त्यहाँ रहेका १ सय ७७ विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर ...